Soosaarayaasha Circuit Neefsashada La Tuuri Karo | Shiinaha Warshadda Neefsashada La tuuro
Wareeg Neefsasho La Kordhiyo Oo Kabaha Kateetarka Labaad Ah
isku xirka aaladda loo isticmaalo wareegyada neefsashada oo leh hal bukaan dhammaad iyo mashiin dhammaad. Waxaa loo isticmaalaa wareegga hawo-mareenka, nidaamka wareejinta suuxdinta, iwm Waxay ka kooban tahay 15 mm isku xiraha guud, oo ku xiran dhamaadka bukaanka. Mashiinka kale dhammaadkiisa wuxuu ku xiran yahay isku xiraha Y ee hawo-mareenka ama nidaamka wareejinta suuxdinta. Badanaa waxaa loo isticmaali jiray dabacsanaanta wareegga oo laga fogaado ilkaha wareegga iyo Caqabadaha wareegyada. Way ballaadhisaa oo xakameysaa booskeeda caadiga ah. Jirka lumen ayaa la isku duubay si loo kordhiyo loona shiro waana loo ilaalin karaa sidii aan ugu baahanahay. Isku-uruurinta iyo Yaraynta dhererka dhererka kateetarka ayaa yaraynaysa meesha dhimatay ee wareegga neefsashada bukaanka. Waxaa loo adeegsaday goobta shaqada suuxdinta iyo hawo-mareenada